Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid “Waxaa jira shaqsiyaad soo maleega qaraxyadda Muqdisho laga geysto..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid “Waxaa jira shaqsiyaad soo maleega qaraxyadda Muqdisho laga geysto..”
Ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo maalintii shalay ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne doorashada lagu wado inay dhacdo bisha October ee sanadkaan ayaa ka hadlay qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay inuu rajo aad u weyn ka qabo in la sugo amniga guud ee dalka marka ay dhacayaan doorashooyinka dadban, islamarkaana la aqoonsaday shaqsiyaadka qaraxyada ka fuliya magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay nabad-sugidda dalka ku raad joogaan.
“Rajo weyn ayaan ka qabaa in ammanka la sugi karo doorashooyinkana ay si fiican u dhici doonaan, waxaa jira shaqsiyaad soo maleega qaraxyadda Muqdisho laga geysto, mana doonayo inaa hataan faah-faahin intaa dheeraad ah ka bixiyo shaqsiyaadkaas, balse qaar waan qabanay, kuwa kalena ciidamada nabad-sugidda Soomaaliya ayaa ku raad jooga, dhawaan ayaana gacanta lagu soo dhigi doonaa” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Sharmaarke.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay in Al-shabaab looga adkaaday dagaalka ay dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM ku hayaan islamarkaana ay kusoo aruureen qaraxyo ay la beegsadaan goobaha dadka shacabka ah ay ku badan yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa imaanaya xilli mudooyinkii ugu dambeysay ay Al-shabaab qaraxyo badan ka geysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, xilli lagu wado in bishaan iyo bisha soo socotaba ay dalka ka dhacaan doorasho.